Kayakairan Daily | कायाकैरन दैनिक || अरु रोगको कारण पनि हो मधुमेह – kayakairan.com
अरु रोगको कारण पनि हो मधुमेह
भरतपुर, २८ कात्तिक
फिजिसियन डा. भोजराज अधिकारीले २०६७ सालमा मधुमेह परीक्षण सुरु गर्दा पहिलोपटक ७ जना फेला पारेका थिए । तिनलाई नियमित परीक्षणमा डाकेर उनले औषधि सेवन गराए । ८ वर्षपछि श्री पुष्पाञ्जली अस्पतालमा उनको सूचीमा ७ हजार मधुमेही छन् । उनीहरु नियमित चेकजाँचमा आउँछन् ।
“आज विश्वमा ४५ करोडभन्दा बढी मान्छेलाई मधुमेह छ”, उनले भने, “सरदरमा यो करिब ७ प्रतिशत हुन आउँछ । अझै बढ्दो दरमा छ ।” मधुमेह अर्थात डाइबेटिजलाई सामान्य भाषामा चिनीरोग पनि भनिन्छ । रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढी भएपछि हुने रोग नै मधुमेह हो । प्यांक्रियाज नामक ग्रन्थीबाट उत्पादन हुने इन्सुलिन हर्मोनको अनियमितता हुनुलाई मधुमेह भएको मानिन्छ ।
इन्सुलिनले चिनि अर्थात कार्बोहाइड्रेटलाई पचाउने काम गर्छ र रगतमा यसको मात्रा सन्तुलित र नियमित गर्ने गर्छ । तर जब इन्सुलिनको उत्पादन हुन छाड्छ रगतमा चिनिको मात्रा बढ्न थाल्छ । प्यांक्रियाजले पर्याप्त इन्सुलिन उत्पादन नगर्दा वा शरीरले इन्सुलिनको उपयोग गर्न नसक्दा मधुमेह हुन्छ ।
डा. अधिकारीले मधुमेहीको चेकजाँच सुरु गरेयता मधुमेह समाज र मधुमेह स्वयंसेवी समाज गठन भइसकेका छन् । तिनीहरुले जनचेतना जगाउनका लागि धेरै काम गरेका छन् । “तैपनि रोगी बढेको बढ्यै छन्”, डा. अधिकारी भन्छन्, “जीवनशैली, खानपान र रहनसहन नसुधारे अझै बढ्ने निश्चित छ ।” पहिले विकसित देशको रोग मानिन्थ्यो मधुमेहलाई । तर, अहिले विकाशसील देशमा यसले बसाईं सरेको छ । “हाम्रोजस्तो देश गरीब भएपनि जनता धनी हुँदैछन्”, उनले भने, “यसले रोगको दर बढाएको छ ।”
उनी नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को उपाध्यक्ष छन् । परिषद्ले भरतपुर आँखा अस्पताल र पाँचवटा लायन्स क्लबसँगको सहकार्यमा ३० लाख जनतामा अध्ययनको तयारी गरेको छ । चितवन, नवलपुर, परासी, बारा, पर्सा र रौतहटका जनतामा मधुमेहले विशेषगरी आँखामा पारेको प्रभाव हेरिदैछ ।
त्यस्तै चितवनमा विभिन्न १० ठाउँमा पाइलट सर्भे पनि गरिदैछ । यसले यहाँ रहेका मधुमेहीको संख्या देखाउनेछ । “तीन ठाउँमा सर्भे गरिसकिएको छ”, डा. अधिकारीले भने, “यसले १० देखि १२ प्रतिशत मान्छेमा मधुमेह रहेको फेला परेको छ ।” बाँकी ७ ठाउँमा सर्भे गरेपछि त्यसको नतिजा सार्वजनिक गर्ने उनले जानकारी दिए ।
मधुमेहले सबैभन्दा छिटो असर गर्ने नै आँखा, मुटु र मृगौलामा हो । “यी महत्वपूर्ण अंग जोगाउनका लागि खानपान र नियमित कसरतमा ध्यान दिनुपर्छ”, डा. अधिकारीको सुझाव छ, “दैनिक ३० मिनेट कसरतचाहिं गर्नैप¥यो ।”
ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा पनि सहरी क्षेत्रमा मधुमेह प्रमुख स्वास्थ्य समस्याको रुपमा रहेको अर्का फिजिसियन डा. प्रकाश खतिवडा बताउँछन् । “सहरमा अनियन्त्रित जीवनशैलीले गर्दा रोगको मात्रा बढी देखिन्छ”, डा. खतिवडाले भने, “खानामा नियन्त्रण गर्ने र नियमित व्यायाम गर्नुपर्छ ।” मधुमेह भएकाले कोलेस्ट्रोल, उच्च रक्तचाप र तौल नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यिनीहरु नियन्त्रण नगर्दा जतिखेर पनि समस्या पर्न सक्छ । यसले हृदयाघात, मस्तिष्काघात तथा मृगौलामा असर गर्न सक्छ । “ठूला रोगको प्रमुख कारक नै मधुमेह हुँदैछ”, उनले भने, “सन् २०२५ सम्म भारत महाद्विप मधुमेहको राजधानी हुन्छ भनिएको छ । यो डरलाग्दो अवस्था हो ।”
मधुमेह विभिन्न कारणले हुन्छ । पहिलो कारण हो आनुवांशिक । बाबुआमामा मधुमेह भएको खण्डमा छोराछोरीमा पनि सर्ने सम्भावना २० देखि ३० प्रतिशतसम्म हुनसक्छ । त्यस्तै बढी मोटो रहनु र आवश्यकभन्दा बढि तौल हुँदा मधुमेह हुने सम्भावना बढी हुन्छ । परिवारमा कसैलाई मधुमेह भइसकेको छ भने हरेक ६ महिनामा रगत परीक्षण गराउन उनको सुझाव छ । परिवारमा नभएकाले पनि १ वर्षमा परीक्षण गराउनु राम्रो हुने उनले बताए । “भइसकेकाले त ३ महिनामा हेर्दा राम्रो”, उनले भने, “अब मधुमेहको लक्षण कुरेर बस्ने होइन, रोग हुनु पहिले नै जचाइहालौं ।”
मधुमेह परिवारको इतिहाससँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले आज मनाउँदै गरिएको मधुमेह दिवसको नारा नै ‘फेमिली एण्ड डाइबेटिज’ (परिवार र मधुमेह) राखिएको छ । यही अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरी चेतना जगाइदै छ ।
मधुमेह मुख्यतया तीन प्रकारका हुन्छन् । टाइप वानमा सामान्यतया बालबालिकामा हुने गर्छ । जहा इन्सुलिनको उत्पादन सुन्य अर्थात अत्यन्त न्युन हुन्छ । रोगीलाई बचाउन कृत्रिमरुपमा इन्जेक्सनद्धारा इन्सुलिन दिनुपर्ने हुन्छ । टाइप टुमा सामान्यतया प्रौढ अवस्थामा हुने गर्छ र विश्वमा भएका मधुमेहीमध्ये धेरै यही प्रकारको मधुमेहका रोगी रहेका छन् । यसमा प्यांक्रियाजले कम इन्सुलिन उत्पादन गर्छ र सरिरले पनि इन्सुलिनको ग्रहण गर्न असक्षम हुन्छ । उमेर बढ्दै जादा यो प्रकारको मधुमेहबाट व्यक्ति ग्रसित बन्ने गर्छन् । जेस्टेसनल मधुमेहमा गर्भवती महिलाहरुमा जुनैपनि बेला रगतमा चिनीको मात्रा उच्च हुन गई मधुमेह हुनजान्छ । यस्तो प्रकारको मधुमेहलाई जेस्टेसनल मधुमेह भनिन्छ ।